Andalana 3: Fampidirana | Avy amin'ny Linux
Manantena aho fa efa vonona ny GNU / Linux ho an'ny feo latency ambany ianao, satria hanomboka hiara-hiasa aminy isika, na mpankafy ny tadivavarana elektronika na ny lohateny vy, mila DAW mahay isika ary, soa ihany, Ardor 3 tonga teto amintsika volana vitsivitsy lasa izay. Hita ao amin'ny repos KXStudio izy io, izay havaozina 2 na 3 andro ankoatry ny famoahana ny kinova ofisialy (tadidio fa i Ardor dia nanomboka tsimbadika fanavaozana haingana miaraka amin'ity kinova vaovao ity).
Amin'ity lahatsoratra anio ity dia hijanona miaraka amin'ny fototr'ilay interface misy azy isika.
Voalohany indrindra: Ardor dia afaka mitantana ny mpizara JACK tena azo antoka, noho izany dia tsy ilaina ny hampiasantsika QjackCTL na ny variants, na dia afaka mamonjy antsika hatrany amin'ny olana amin'ny fahafantarana azy ireo aza izany. Noho io antony io dia manoro hevitra anao aho ny handanianao fotoana miaraka amin'i QjackCTL na i Jack aza avy ao amin'ny terminal, ary avy eo hiasa irery ianao avy any Ardor (raha sanatria DAW izany).
Averiko ihany: tokony ho fantatsika ny Fototra JACK ary manana ny multimedia distro. Ny olana misy amin'ny JACK dia ho ivelan'ity andiana lahatsoratra ity.
Amin'ity fampidiran-dresaka ity dia handefa mivantana an'i Ardor aho.
1 1. Fikirana Audio / MIDI
2 2. Mamorona / Mivory fivoriana
3 3. Window lehibe
4 4. Mixer ao amin'ny lisitry ny tonian-dahatsoratra sy fanovana
6 6. Ilay Mixer
7 7. «Ampidiro» menio
1. Fikirana Audio / MIDI
Raha mbola tsy nanomboka ny JACK taloha isika dia io no zavatra voalohany hitantsika.
Manan-danja manokana ny kiheba "fitaovana". Ao no hametrahantsika ny masontsivana ifotoran'ny mpizara audio JACK.
Mpamily: karazana interface audio. Araka ny efa fantatrao, ny karatra integrated na usb dia miasa amin'ny ALSA sy ny firewire miaraka amin'ny FFADO.
Audio interface: miankina amin'ny mpamily nofidintsika, afaka mifidy amin'ireo fitaovana misy isika.
Haben'ny buffer: lafiny fototra momba ny faharetana (fahatarana) ary ny fitombanan'ny rafitra. Arakaraka ny haben'ny buffer size dia avo kokoa ny latency (latsaky ny 20 ms no atolotra anao mba hahafahan'ny lagy manoratra eo ambonin'izay henontsika). Etsy ankilany, ny kely kokoa amin'ny haben'ny buffer dia hisy latency kely kokoa, fa ny fampisehoana avo kokoa dia takiana amin'ny rafitra ihany koa. Miaraka amin'ny buffer 256 na 512 dia tokony hirakitra an-tsoratra tsy misy olana, raha 1024 na mihoatra no hotolorana rehefa mifangaro na mifehy, satria amin'ireto dingana ireto dia tsy dia zava-dehibe loatra ny faharetana.
2. Mamorona / Mivory fivoriana
Aorian'ny fandefasana ny mpizara audio dia afaka manokatra fizarana fandraisam-peo efa misy na mamorona iray vaovao isika. Rehefa mamorona fotoam-pivoriana vaovao izahay dia misy lahatahiry iray manontolo izay mandamina ny fampahalalana sy ireo fakana feo samihafa momba ny tetikasanay (toy ny any amin'ny DAW mendrika ny sira).
Tsy soso-kevitra ny hidiranao amin'ireto lahatahiry ireto raha tsy te handika rakitra iray aondrana ianao satria afaka manova ny fampahalalana mifandraika amin'ilay programa sy manimba ny fotoana. Na dia azo averina atambatra aza ny zava-drehetra, tsara kokoa ny misoroka an'io asa io. Raha ny hitondranao ny fotoana any amin'ny PC hafa no tadiavinao dia mila mandika ilay fampirimana fotsiny ianao
Miaraka amin'i Ardor dia afaka mamorona «modely» isika. Hanalavitra antsika hanana tetik'asa ifotony misy lalamby sy bus ary plugins tadiavintsika izany mba tsy hamerina ny fizotrany rehetra amin'ny firaketana miaraka amina rafitra mitovy amin'izany. Tsy lohahevitra mifandraika izany ankehitriny, satria io no ho fidiko manaraka ao amin'ny Ardor.
Etsy ankilany, afaka mamorona «seho» koa isika, izay fiovaovan'ny tetik'asa azo alaina amin'ity menio ity. Toy izany koa, ho lohahevitra hojerena izy io aorian'izay.
3. Window lehibe
Ny interface Ardor lehibe dia misy ireto fizarana manaraka ireto:
Fitaterana: Fanaraha-maso playback sy metronome, fotoana ("anatiny" amin'ny alàlan'ny default ka ardor no mifehy ny fitaterana), fampahalalana momba ny mpizara JACK, fivoriana ary fanovana totohondry.
Fitaovana fanovana: mpamidy fomba fiasa (fanitsiana clip, faritra ...), haben'ny zotra sy fanaraha-maso zoom, ary fikirana harato / valiha (izay manamarika ny fihetsiky ny rakipeo sy ny faritra manohitra ny fizarazaran'ny fotoana).
Fotoana: raha tsindrio havanana eo isika dia aseho ny menio iray ahafahantsika misafidy ireo bara-potoana tadiavintsika: kaody ora, metric, tempo, punch, loop, sns. Azontsika atao ny manova na manome anarana ny tondro (metric, tempo, mari-toerana) amin'ny alàlan'ny fisintomana azy ireo na amin'ny fikitihana ankavanana.
Multitracks: fizarana misy ny làlan'ny bus bus (amin'ny alàlan'ny default) ary ny làlambe sy bus rehetra izay tianay ampiana (amin'ny fipihana tsara na avy amin'ny menio «track»). Miankina amin'ny haavon'ny làlan-kaleha, fanaraha-maso bebe kokoa na kely no haseho.
Famintinana: fahitana ny firafitry ny lohahevitra iray manontolo.
4. Mixer ao amin'ny lisitry ny tonian-dahatsoratra sy fanovana
Avy amin'ny menio «View» no ahafahantsika manampy ireto fizarana roa ireto.
Ny mixer ao amin'ny tonian-dahatsary (ankavia) dia ahafahantsika manova ny masontsivana fampifangaroana ny làlana voafantina (plugins, inputs and outputs, pan…).
Ny lisitry ny fanovana (ankavanana) dia ahafahantsika miditra amin'ireo fakana feo samihafa (voarakitra sy voahodina), fanamboarana ny làlambe sy bus, vondrona ... Ireo rakipeo na faritra dia manome menio latsaka mba hamantarana ireo fiovana mety hitranga niharam-boina. Avy eto isika dia afaka misintona azy ireo mankany amin'ny tehezan-tendrombohitra.
Ny "mixer in editor" dia tena ilaina tokoa amin'ny fampifandraisana ireo làlana sy bus rehetra misy ny fampidirany sy ny vokany, saingy indraindray isika dia hahita ny toe-tenantsika mila manao fifandraisana marobe (alaivo an-tsaina hoe te-hanafatra lalan-6 izahay tom izay tianay hifandraisany amin'ny fiara fitateram-bahoaka manokana). Ho an'ity, ary ho bebe kokoa, ny mpitantana ny fifandraisana an-tserasera dia hahatonga antsika hanadino tanteraka ny fitaovana toy ny QJackCTL.
6. Ilay Mixer
Vantany vao vita ny fandraisam-peo dia handany ny ankamaroan'ny fotoana ato amin'ity varavarankely ity izahay (azo idirana avy amin'ny menio na miaraka amin'ny 'Alt + M'). Afaka mahita fizarana efatra ianao:
Làlan-kaleha sy bus (miaraka amin'izy rehetra, ny fibaikoany REHETRA: anarana, fidirana, dingana, fampidirana, fandefasana, vilany, fader, fivoahana… ankoatry ny hafa).
Ho takatrao fa ity faritra ity dia be loatra, noho izany dia mijanona amin'ny fidirana hafa. Ny mahazatra ny famokarana mozika dia efa mahalala izay hatao aminy.
7. «Ampidiro» menio
Mba hahafahanao manomboka milalao miaraka aminy, mitadiava tetik'asa iray izay natondranao an-tsokosoko (raha tsy manana eo am-pelatananao ianao, dia azonao atao ny misintona ny iray amin'ireo nomen'ny «guru» Mike Senior).
Ny torohevitro momba an'ity menio "File> Import" ity dia ny safidinao ny safidy "import in login", "map: 1 track per file" ary ny "copie files to session".
Ireo mpamorona an'i Ardor dia somary misalasala ny hiasan'ny olona amin'ny MP3, ka tsy nataon'izy ireo mora. Raha mp3 ny tetikasanao, azonao atao ny mamadika azy ireo amin'ny Audacity, ny terminal na ny hafa. Ny olana matetika dia tsy olana, raha manana Ardor hafa ny rakitrao dia haseho azy amin'ny mena, fa hampiova azy ireo tsy misy olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Andalana 3: Fampidirana
Roy batty dia hoy izy:
Tena mahaliana. Misaotra anao!
Valiny tamin'i Roy Batty
Amin'izao fotoana izao dia tsy ampy ny fotoanako amin'ireo zavatra ireo, fa rehefa miverina amin'ny lohahevitra mozika ao amin'ny GNU / Linux aho dia hijanona eto handramako. Ha ha ha!
Misaotra tamin'ity andiany ity. Fiarahabana.
Salama, mbola tsy hitako ny fomba handaminana tsotra an'i Ardor
, Sambany aho amin'ity programa ity ary tsy dia azoko loatra, azonao atao ny manazava azy tsara kokoa
miaraka amin'ny sary izay mampiseho ny fomba tokony handrindrana azy?
Hita fa mila manoratra ny tenako aho, tiako ny mihira sy mitendry gitara, te-hanoratra ny hirako aho
amin'ny solosainako miaraka amin'ny mikrô anatiny, satria tsy manana iray hampifandray azy aho
Tena tiako izany raha vitanao izany.
misaotra mialoha sy arahaba!
Valio amin'i Emiily
Lohahevitra Bespin ho an'ny KDE aingam-panahy avy amin'ny OSX